शिवम् प्लाष्टिकमा कसले आगो लगायो? शंकाको शुई संचालक तिरै तेर्सियो – Janacharcha.com
» आर्थिक अंक: 2196
शिवम् प्लाष्टिकमा कसले आगो लगायो? शंकाको शुई संचालक तिरै तेर्सियो
Janacharcha.com शनिबार, चैत्र ०१, २०७६ मा प्रकाशित
✍ दिनेश खड्का
मोरङको बुढीगंगास्थित शिवम् प्लाष्टिक उद्योगमा केहि दिन अघि (फागुन २८ गते) भएको आगलागी शुनियोजित भएको आशंका गरिएको छ ।
उक्त उद्योगका संचालकमा बासु गोल्यान, देवेन्द्र अग्रवाल र विजय तोदी छन् । उद्योगमा गोल्यानको ६५ प्रतिशत, अग्रवालको २५ प्रतिशत र तोदीको १५ प्रतिशत हिस्सा छ । तर उद्योग संचालनमा संचालकहरुबिच नै मतवेद हुदा तिनैजनाको एकआपससँग करिब १० वर्षदेखि बोलचाल छैन ।
उद्योग संचालनमा विवाद आएदेखि नै गोल्यानले उद्योगलाई एकलौटी ढंगले संचालन गरिरहेका थिए । एकलौटी ढंगले १० वर्षदेखि उद्योग संचालन गरिरहेका गोल्यानसँग आर्को दुईपटक पर्टनरले (अग्रवाल र तोदी) हिसाब फरफारक गर्न पटक पटक अनुरोध गरिरहेका थिए । पटक पटक हिसाब फरकारक गर्न अनुरोध गर्दा पनि गोल्यानले आज भोली भन्दै १० वर्षदेखि आफ्ना पार्टनरलाई टार्दै आएको बुभिएको छ ।
स्रोतका अनुसार, गत फागुन २८ गते उद्योगमा आगलागि भएपछि सम्पुर्ण कागजात जलेर नष्ट भएको भन्दै हिसाब फरफारक गर्न गोल्यान आनाकानी गरिरहेका छन् । त्यससँगै उद्योगमा आगलागीको कारण उद्योगमा ठुलो क्षती भएको भन्दै पार्टनरहरुलाई एक रुपैयाँपनि दिन नसक्ने भन्दै गोल्यान पन्छिरहेको स्रोत बताउँछ । सोही हिसाबलाई रफदफा गर्न गोल्यानले जनाजान उद्योगमा आगलागीको प्रपञ्च रचेको स्रोत दाबी गर्दछ ।